Taoist Cosmology ၏တစ်ဦးကအကျဉ်းချုပ်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
Taoist Cosmology မှာ Insider ရဲ့မျှော်
- ကျွန်တော်ရိပ်မိအဖြစ်ကမ္ဘာကြီးကိုဖြစ်တည်မှုသို့ကြွလာပုံကိုအကြောင်းကိုဝဠာ၏မူလအစအကြောင်းပုံပြင်: ခပ်သိမ်းသောဓမ္မအစဉ်အလာတစ်ခုသတ်မှတ် (သို့မဟုတ်ဆိုလို) cosmology ရှိပါတယ်။ Taoism အတွက်, ဒီ cosmology လုံ့လရှိသူနှင့်ကို elemental အခြေခံမူအပေါ်အစားအာရုံစိုက်, သင်္ကေတနတ်ဘုရားများ၏ထူးခြားမှုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစနစ်အားပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အ Taoism ရင်ဆိုင်သူတို့အားအတော်လေးပုံမှန်မဟုတ်သောနှင့်စိတ္တဇပုံပေါ်နိုင်ပါတယ်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းအခြေခံနေသောခေါင်းစဉ်:
အစအဦး၌, ဝူ Chi, ဒါမှမဟုတ် Tao ကအဖြစ်လူသိများကာအဆုံးမဲ့ပျက်ပြယ်ရှိ၏။ အဆိုပါ Tao ကခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုလည်းဖော်ဆောင်ရာကနေကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစွမ်းအင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကျယ်ပြန့်နတ်မင်းကြီးစကွဝဠာထဲကနေ, Tao က မှစ. , တစျခုပေါ်ထွက်လာ။
တကမ်ဘာပျေါတှငျတငျပွကြောင့်နှစ်ခုသို့အပိုင်းသုံးပိုင်း: အယဉ်များနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်၏ယန်, ဖြည့်စွတ်သောအခြေအနေများ (ယန်း) နှင့်အရေးမယူ (ယဉ်) ။ ဤအဆင့် Tao က၏စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးထဲက duality / polarity ကပေါ်ပေါက်ရေးကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ အဆိုပါ "ကခုန်" - အစဉ်အမြဲအသွင်ပြောင်း - ယဉ်နှင့်ယန်လောင်စာ၏စီးဆင်းမှု Qi (chi) Taoist cosmology ခုနှစ်, Qi က၎င်း၏နို့ဆီပစ္စည်းပြည်နယ်နှင့်၎င်း၏ပျော့လုံ့လရှိသူပြည်နယ်အကြားအဆက်မပြတ်အသွင်ပြောင်း၌တည်ရှိ၏။
ယဉ်များနှင့်ယန်၏ဤကခုန်ကနေပေါ်ထွက်လာ ငါးခု element တွေကို သစ်သား (အငယျဆုံးသော Yang), မီး ( သာ. ကြီးမြတ် Yang), သတ္တု (ပြောင် yin), ရေ ( သာ. ကြီးမြတ် yin), နှင့်မြေကြီးကို (ဗဟိုအဆင့်): ။ ဒါ့အပြင်ကဒီမှာထုတ်လုပ် Yijing (ကျနော် Ching) ၏ 64 hexagrams ဖွဲ့စည်းသောရှစ် trigrams (Bagua) ဖြစ်ကြသည်။ ဒီအဆင့်ဟာထူးခြားဆန်းကြယ်ဤလောကကိုအစိုးရသောကို elemental မဲဆန္ဒနယ်မှ၏, ကနဦးယဉ် / ယန် duality ထဲကဖွဲ့စည်းခြင်းကိုကိုယ်စားပြုတယ်။
ငါးမဲဆန္ဒနယ်ဒြပ်စင် မှစ. ငါတို့သည်တွေ့ကြုံခံစားအရာဝတ္ထု, သူမြို့သားများနှင့်ကမ္ဘာ၏ဖြစ်ရပ်၌ရှိသမျှသောကြောင့်ထင်ရှားတည်ရှိရှိသမျှတို့ကိုကိုယ်စားပြုသည် "ဆယ်တထောင်သောအရာတို့ကို," လာကြ၏။ လူ့သတ္တဝါ, အ Taoist cosmology အတွက်ဆယ်ပါးတစ်ထောင်အရာတို့တွင် - ကွဲပြားခြားနားသောပေါင်းစပ်အတွက်ငါး Element တွေကိုများ၏ပေါင်းစပ်။ ဝိညာဉ်ရေးရာကြီးထွားမှုနှင့်ပြောင်းလဲမှု, Taoists အဘို့, လူတစ်ဦးအတွင်းငါး Element တွေကိုဟန်ချက်ညီတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ များစွာသောဘာသာရေးစနစ်များနှင့်မတူဘဲလူသားတွေသဘာဝကမ္ဘာမှသီးခြားအရာတစ်ခုခု, ဒါပေမယ့်သူကအဖြစ်ပဲအခြားပေါ်ထွန်းခြင်းအဖြစ်မှတ်ကြသည်မဟုတ်။
ဤဖြစ်စဉ်ကိုဖော်ပြ၏နောက်ထပ်လမ်းသည်ဤအဆင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံစံသို့လုံ့လရှိသူဝိညာဏ်၏မျိုးနွယ်ကိုယ်စားပြုသည်ဟုဆိုရန်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးမျိုးသောသုံးပြီး Taoist ဘာသာရေး, အတွင်းပိုင်းအဂ္ဂိရတ် နည်းစနစ်, Tao က၏လုံ့လရှိသူ, လာပါဘုံကိုပြန်သွားဖို့ကိုဖြစ်ရပ်များ၏ဤ sequence ကိုပြောင်းပြန်လှန်နိုင်ကဆိုသည်နေကြသည်။ Taoism များ၏အလေ့အကျင့်, ယေဘုယျအတွက်ဆယ်ပါးတစ်ထောင်အရာအတွက်ရှိနေခြင်းနှင့်တစ်လောကလုံး Tao က၏ပြုပြင်ခြင်းရိပ်မိဖို့နဲ့အတူဟန်ချက်ညီညီအသက်ရှင်ရန်ကြိုးစားသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ Gandhara ၏ပျောက်ဆုံးသွားသောကမ္ဘာ့
ဧကရာဇ်ချားလ် III ကို
The New School တွင် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
Homer Simpson ရဲ့ထိပ်တန်း 10 အစားအစာများ
ဂြာမနျတွင် "လူတွေက" များအတွက်စည်းကမ်းချက်များကိုဘာသာပြန်ဆို
Bob Dylan နဲ့ဂျော်နီငွေ: နှစ်ဦးတေးရေးဆရာဖို့အတွက် Titans တွေကသမိုင်း Make
GRE အမှတ်ပေး 101
သမင်ဒရယ် v ။ Wade မှောက်ခဲ့ကြတဲ့အဘယျသို့ဆိုလြှငျ?
အဘယ်ကြောင့်ပျားရည် (အချို့) ပန်းချီအတွက်အသုံးပြုပါသလဲ?
ဂီရိ - ကိုယ်ကျင့်တရားတာဝန်
အဆိုပါကြွက်တစ်ဦး TWebBrowser စာရွက်စာတမ်းကျော်လှုံ့ဆျောပေးတဲ့အခါ Hyperlink တစ်ခုကို၏ Url ကို Get
တစ်ဦး Quadruple Bogey ဆိုတာဘာလဲ
သင်က Creole ဘာသာစကားများအကြောင်းသိထားသင့်အဘယျသို့
Pillnitz ၏ကြေညာစာတမ်း: ကောင်တာပြင်သစ်တော်လှန်ရေးအားဖြင့်တစ်ဦးတိုက်တန်းနစ်မှားယွင်းနေသည်
ရှင်ပေါလုရှိခိုးနှင့်5သီချင်းများခုနှစ်တွင် Raiders '' ပေါ့ပ်အမွေအနှစ်
အီတလီကြိယာ conjugation: Ricordare